के हो ‘आरआरआर’ को पुरा अर्थ ? – Sandes Post
के हो ‘आरआरआर’ को पुरा अर्थ ?
March 28, 2022 2006
बहुचर्चित फिल्म ‘आरआरआर’ को नाम अहिले तपाई हाम्रो मुखमा झुण्डिएको छ । फिल्मको पोष्टर हेर्दा अंग्रजीमा लेखिएको (RRR) को अर्थ के हो ? भन्ने सब कोहिलाई जानकारी नहुन सक्छ । आज हामी ‘आरआरआर’ को विषयमा यहाँहरुलाई जानकारी दिदैछौ । ‘आरआरआर’ को पुरा अर्थ हो , राइज, रोर, रिभोल्ट को छोटकरी रुप हो ‘आरआरआर’। जसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा उदय, गर्जन र विद्रोह हुन्छ।
‘आरआरआर’ ले बक्स अफिसमा रेकर्ड तोड्ने क्रम जारी छ । अब फिल्मले पहिलो साता अर्थात् तीन दिनमै ५ सय करोडभन्दा बढीको वर्ल्डवाइड व्यापार गरेर इतिहास रचेको छ ।
५५० करोडभन्दा बढीको बजेटमा बनेको ‘आरआरआर’ विश्वभर तीन दिनमा धेरै कमाई गर्ने पहिलो भारतीय फिल्म बनेको छ । तरण आदर्शले पोस्ट सेयर गर्दै ‘आरआरआर’ भारतको सबैभन्दा ठूलो ब्लकबस्टर फिल्म बनेको बताए । फिल्मले तीन दिनमा विश्वभर ५ सय करोडभन्दा बढीको व्यापार गरेर नयाँ बेन्चमार्क कायम गरेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार रामचरण तेजा, जुनियर एनटीआर, अजय देवगन र आलिया भट्ट स्टारर फिल्मले तेस्रो दिन (आइतबार) १३० करोडभन्दा बढी कलेक्सन गरेको छ । यसअघि फिल्मले दोस्रो दिन (शनिबार) ११४.३८ करोड र उद्घाटन दिन (शुक्रबार) २५७.१५ करोडको विश्वव्यापी व्यापार गरेको थियो ।
‘आरआरआर’ मार्च २५ मा हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड र मलायालम भाषामा थिएटरमा रिलिज भएको थियो। रपोर्टका अनुसार ‘आरआरआर’ लगातार ३ दिनसम्म १०० करोडभन्दा बढीको व्यापार गर्ने पहिलो भारतीय फिल्म पनि बनेको छ । योसँगै फिल्मको तेलुगु संस्करणले तीन दिनमा १२६ करोडभन्दा बढीको नेट कलेक्सन गरेको छ ।
तरण आदर्शले अर्को पोस्टमा भनेका छन्, ‘आरआरआर’को हिन्दी संस्करणले तेस्रो दिन भारतमा ३१.५० करोडभन्दा बढी कमाएको छ । यसअघि फिल्मले दोस्रो दिन २४ करोड र पहिलो दिन १९ करोडभन्दा बढीको व्यापार गरेको थियो । फिल्मको हिन्दी संस्करणले भारतमा अहिलेसम्म पहिलो सप्ताहन्तमा ७४.५० करोडभन्दा बढीको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ ।
Prevफेरि के भयो ? दुर्गेशले दिए मुद्धा हाल्ने चेतावनी !
Nextपुरुषले खाने गर्भनिरोधक चक्की बन्यो